यस्ता खानेकुराहरु फ्रिजमा राख्ने गरेमा स्वास्थ्यलाई हुन्छ ठुलो हानी ! - ज्ञानविज्ञान
गर्मीको समयमा खाना छिट्टै बिग्रने गर्छ । त्यसैले खाना बिग्रन नदिनको लागी खानालाई फ्रिजमा राखिने गरिन्छ । तर कतिपय खानाहरु हामीले फ्रिजमा राख्दा त्यस्ता खानेकुराहरु स्वास्थ्यको लागी निकै हानिकारक हुने गर्छन् । कतिपय खानेकुराहरु फ्रिजमा राख्दा तिनीहरुमा रहेको पौष्टिक तत्वहरु नष्ट भएर जान्छन् । त्यसैले कस्तो खानेकुरा फ्रिजमा राख्ने र कस्ता नराख्ने भनेर जानी राख्नुपर्छ ।
फ्रिजमा राख्न नहुने खानेकुराहरु यस्ता छन्
फ्रिजमा राख्दा टमाटर भित्रको ‘मेम्ब्रन’ टुट्छ र टमाटर चाँडै गल्छ अनि बिग्रिन्छ ।
५) निबुवा र सुन्तला
फ्रिजमा राख्दा मह गाढा हुन्छ र यसमा क्रिस्टल बन्न थाल्छ ।
८) कफी पाउडर
यसले फ्रिजमा राखिएका अन्य वस्तुहरुको वास्ना सोस्छ र यसको आफ्नो वास्ना कम हुन्छ ।
९) हरियो पत्ता भएका फलफुल
प्याजमा चिसोपना धेरै हुन्छ र फ्रिजमा राख्दा यसको बोक्रा गल्छ ।
मानिसहरु गार्मी लागे संगै चिसो पानी पिउन रुचाउने गर्छन । तर फ्रिजमा राखेको पानीले स्वास्थमा निकै खराब गर्ने गर्दछ । जुन कुरा मानिसलाई थाहा हुदा हुदै पनि वास्त्ता गर्दैनन् ।
तल दिएको छ फ्रिजमा राखेको पेय पधार्थ पिउदा शरीरमा पुग्ने असर
जसरी फ्रिजमा खानेकुरा राखेको केही समयमै जम्ने गर्छ । त्यसैगरी वरफ वा चिसो पेय पदार्थले पेटको फोहोर जमाएर कडा बनाइदिन्छ । जसका कारण कब्जियत तथा आन्द्रा सम्बन्धी समस्या निम्तिने गर्छ । साथै भविष्यमा यसबाट पाइल्स, आन्द्रा सम्बन्धि ठूलो समस्या निम्तन सक्छन् ।
Don't Miss it गर्मी बढ्यो, शरीरलाई शीतलता दिन खानुहोस् यस्ता फलफूल !
Up Next ज्वानोको झोल खानुका यस्ता फाइदाहरु, तौल घटाउनु मन भए खानुहोस्